Photoful: ny fanoloana mety indrindra ho an'ny fampiharana iOS 7 Photos | Vaovao IPhone
Photoful: ny fanoloana mety indrindra ho an'ny fampiharana iOS 7 Photos
Raha tsy tianao ny fampiharana Photos, na eo aza ny fiovana natao tamin'ny iOS 7, Photoful no mety hisolo toerana mety indrindra. Photoful dia fampiharana sary tena tsara izay manolotra mpisolo toerana, amin'ny lafiny maro, tsara kokoa noho ny iOS 7 mihitsy.
Miaraka amin'ity rindranasa ity dia afaka mivezivezy amin'ny fizotry ny fotoana nakanantsika ny sary, afaka manampy dikanteny sy tag izahay. Mampitaha ny fampiharana Photos amin'ny Photoful, toa toa ny mpijery sary Windows ny fampiharana iOS.
Ny fampiharana manerantany dia mampiseho ny sariny amin'ny fomba mitovy amin'ireo fanangonana vaovao izay alamin'ny fampiharana Photos, izay manasokajy azy ireo amin'ny daty fotsiny, fa tsy amin'ny daty sy toerana toa ny iOS 7. Amin'ny fipihana ireo sary, dia mihalehibe ny fomba fijery mandra-pivoakany habe feno. mandehana amin'ny sary mankany amin'ny sary amin'ny alàlan'ny fanodinana haingana araka izay tadiavintsika. Ny fahatsapana dia izany mijery pejy web izahay izay ahantona ny sary tianay.
Rehefa tonga amin'ny sary mahaliana anao ianao dia azonao atao ny misafidy azy hizara amin'ny alàlan'ny safidy isan-karazany na handefa izany any amin'ny fako manala azy ireo amin'ny fampiharana (tsy avy amin'ny roul).
Safidy tena mahaliana izay ananan'i Photoful ny sary tag. Amin'izany no ahafahantsika miditra haingana sy mora amin'ireo sary ankafizintsika. Azontsika atao ny misafidy sary maromaro amin'ny fotoana iray ary manampy marika azy rehetra amin'ny fotoana iray, fa tsy mandeha tsirairay.
Ny fomba fisafidianana sary dia fanampiana iray hafa manan-danja amin'ny Photoful. Mila fotsiny isika solafaka eo an-tampon'ny sary ny rantsan-tànanao hisafidianana azy ireo. Raha manana maromaro misesy isika dia afaka misisika ny rantsan-tànantsika manelanelana azy ireo ary ho voafantina ho azy izy ireo. Mba hanesorana ilay marika dia mila misintona azy indray isika.
Manerantany ny fampiharana ary azo alaina maimaim-poana.
Fampahalalana bebe kokoa - Ahoana ny fomba fandefasana sary mihoatra ny 5 amin'ny alàlan'ny paositra (Cydia)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Photoful: ny fanoloana mety indrindra ho an'ny fampiharana iOS 7 Photos
SleekSleep: hidio ny iPhone miaraka amin'ny sensor akaiky (Cydia)
Ahoana ny fomba hampiasana ny Touchive Touch amin'ny iPhone